Umlobi weTrones Umbhali uchaza ukubaluleka kweMpawu eziMhlophe eziHambekayo - Inkcubeko Yopopu
Umlobi weTrones Umbhali uchaza ukubaluleka kweMpawu eziMhlophe eziHambekayo
Enye yezona mfihlakalo zinkulu zisuka Imidlalo yeethrone kutyhilwe.
Kudliwanondlebe olutsha ne INew York Post , GoT umbhali uDave Hill -ubhale inkulumbuso ye-Season 8 u-Winterfell -wabelana ngokubaluleka komnye wemiboniso ebonakalayo: i-White Walkers spiral pattern.
indlela yokwenza intlaka yokuncamathisela iintyatyambo inyathelo nenyathelo
Hill uxelele Thumela , Njengoko sibonile kunye no-Bran kunye neRaven-Eyed Raven, ipateni yokujikeleza yayingcwele kuBantwana beHlathi, abadale uKumkani woBusuku ngokunikela ngendoda eyayibanjiwe kwinduli yamatye. UKumkani wasebusuku emva koko wamkela uphawu njengoluhlobo lokuhlambalaza, njengoSathana onomnqamlezo ongasentla.
Isimboli yavela okokuqala kuthotho lokulinga, xa iiNights Watch rangers zahamba ngaphaya kodonga kwaye zafumana inkampu yabantu abafileyo, imizimba yabo yayiququzelelwe yirhombus enomgca ohamba kuyo. Umoya emva koko wavela kwakhona, wenziwa ngamacandelo ehashe afileyo.
Ukuhamba kuya kubaluleke ngakumbi xa u-Bran Stark engqina ngokwenziwa nguKumkani wasebusuku ngaBantwana beHlathi embindini womoya, ebonisa ukuba isoyikiso sabafileyo sakhawulwa ngaBantwana ekulweni kwabo namadoda okuQala.
Uyenza njani iicookies ezineswekile ezinjengevenkile
Ngelixa wayehlala kwisiqithi se-Dragonstone, uJon Snow kunye no-Daenerys Targaryenfind imizobo yemiqolomba yezi mpawu, ebonisa ixesha elidlulileyo apho aMadoda okuQala naBantwana beHlathi ekugqibeleni bajoyina imikhosi balwe noKumkani woBusuku.
Isiqendu esilandelayo se-HBO Imidlalo yeethrone ifika ngo-Epreli 21.
I-HBO Yazisa ngoTshintsho kwiiNkqubo zokuSasaza kwaye abaThengi bashiyeke bedidekile ngakumbi
Umnxeba woXanduva: Iziporho eziTshiweyo ngaphambi kokuSungulwa (Ividiyo)
Ukubeka zonke iziqendu ezili-124 zokuHlala kwelanga ePhiladelphia
Ngaba uFox kunye noMarvel babile Kanye Kanye kwi-Deadpool Idea evela kwiFan?
Ungazilungiselela njani iipesika ezintsha zeepayi
indlela yokuhombisa inyathelo lekhekhe ngenyathelo
loluphi olona manyala luthandwayo
Ubomi obumnyama t-shirt
UMichael Strahan Ufuna ukuGcinwa kwabaNtombi basePrayimari, Amabango Owayesakuba ngumfazi wabahlukumeza
UStrahan noMuggli batshata ngo-1999, kwaye bamkela amawele abo ngo-2004.
UJennifer Esposito Wont ubuyela kwiBlue Bloods
Umdlali weqonga uxelwe ukuba ungaphandle kothotho phakathi kwengxabano.
URob Kardashian akadingi kuhlawula inkxaso yabantwana kuBlac Chyna
I-TMZ inika ingxelo yokuba esi sibini sifikelele kwisivumelwano.